အဆိုပါညီလာခံတွင်လေထုထဲတွင်သညျယရှေုတွ | Apg29
4:17 Th 1 ။ ထိုအခါအသက်ရှင်ဖြစ်ကြပြီးကျန်ကြွင်းသောငါတို့သည်ဖမ်းမိခံရကြလိမ့်မည် ဖွင့် ၌သူတို့နှင့်အတူ မိုဃ်းတိမ် ထဲမှာသခင်ဘုရားနှင့်တွေ့ဆုံရန် လေ ။ ဒီတော့ကျနော်တို့ရကြလိမ့်မည် အမြဲသခင်ဘုရားနှင့်အတူရှိ ။
ကမျြးစာကကျနော်တို့မိုဃ်းတိမ်၌ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားသင့်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ ကရပ်တည်သတိပြုပါ တက် ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးတည်ချက်တက်အရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ခဲ့ကြသည့်အခါ ဖွင့် , ငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ယေရှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပါလိမ့်မယ်။ တဖန်အာကာသမှဘာသာပြန်ထားသည်။
ဒါပေမယ့်ခုနစျနှအကြာတွင်ယရှေုသညျ, ထိုပီတိကိုမွကွေီးမှပြန်လာကြလိမ့်မည်ပြီးနောက်သူသညျအသငျးတျောတတ်၏။ ထို့နောက်သူကယေရုရှလင်မြို့သို့ (အထံတော်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားအဘယ်သူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သူကိုကျွန်တော်တို့ရှိသမျှတို့,) အဘုရားကျောင်းသို့ပြန်သွား၏။
Jud 1:14 ။ ကှ္ဂျကှ္ဂျ, ထာဝရဘုရားသည်မိမိသန့်ရှင်းသူတို့၏တစ်ဦးမရေမတွက်နိုင်သောကုမ္ပဏီနှင့်အတူကြွလာ: အကယ်. ထိုအကိုလည်းဧနောက်, အာဒံမှသတ္တမဟူမူကား, ပရောဖက်ပြု။
ကွင်း၌ငါရှိတယ်သောသင်သတိပြုမိစေနိုင်သည် "မရေမတွက်နိုင်သောကုမ္ပဏီ။ " ကျနော်တို့အရှင်များသောသူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ယေရှုနှင့်အတူပြန်လာပါလိမ့်မည်!
က "မိုဃ်းတိမ်ကိုစီး" နှင့် "ဝေဟင်" အတူတူပါပဲမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ကအတူတူပါပဲခဲ့လျှင်၎င်းသည်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောစကားများရှိခဲ့ပါလိမ့်မည်။ မိုဃ်းတိမ်တို့သည် (မိုဃ်းတိမ်ကိုစီး) ကိုအဖွင့်ဖိအားပေးဖို့, ဒါပေမယ့်သူကကျွန်တော်သခင်ဘုရားနှင့်ကိုက်ညီသောလေထုထဲတွင်ပါပဲ။ သို့မဟုတ်ပါကတဖန် "အာကာသ" တွင်ဘာသာပြန်ထားသောကြောင့်။
ပိုထင်ရှားဖြစ်လာနိုင်အောင်ကျနော်တို့က trepunktslista လုပ်ပါ။
ထိုအခါငါ add နိုင်ပါတယ်စတုတ္ထအချက်:
ယရှေုသညျကျောယေရုရှလင်မြို့သို့လာသောအခါအကြှနျုပျတို့နှငျ့သူယခင်က raptured ခဲ့!